Ulethelwani eMabhida owamanqamu eMTN8 - Bayede News
Home » Ulethelwani eMabhida owamanqamu eMTN8
Ube ngumpetha kunzima enkundleni nangaphandle
Le nkundla esike yasingatha imidlalo yomhlaba isikhombise kaningana ukuthi iyakwazi ukumelana nemidlalo emikhulu
Ezinsukwini ezingezingaki ezedlule iPremier Soccer League (PSL) imemezele ukuthi inkundla enkulu kanobhutshuzwayo esifundazweni iKwaZulu-Natal, iMoses Mabhida Stadium, izosingatha umdlalo wamanqamu womqhudelwano womkhumulajezi iMTN 8.
Lokho akungithusanga nhlobo ngoba vele kuyinto ejwayelekile ukuthi le nkundla kube yiyo esingatha imidlalo yamanqamu.
Okungenze ngangathuka ukuthi iMoses Mabhida Stadium ezosingatha lo mdlalo ozokuba kule mpelasonto, ukuthi le nkundla isisingathe imidlalo eminingi yamanqamu ngempumelelo. Ngisho neqembu lesizwe imbala iBafana Bafana imidlalo yayo eminingi iyidlalela kuyo.
Iqembu iKaizer Chiefs enabalandeli abaningi kuleli iyathanda ukusebenzisa le nkundla ngoba ithi yesekwa kakhulu uma idlala imidlalo yalo kuyona.
Yize singeke sasiphikisa isinqumo sePSL, nomlando futhi iMoses Mabhida Stadium uyiveza njengenkundla esingathe imidlalo yamanqamu kodwa lokhu kushiye imibuzo.
Imibuzo ekhona ethi la maqembu azodlala lo mdlalo akuwona aKwaZulu-Natal kungani elethwe lapha? Owesibili ngoba vele abalandeli ngeke babekhona enkundleni kungani ungadlalwanga lo mdlalo lapho la maqembu azoba seduze nalapho aqhamuka khona?
Lapha emhlabeni siphila ngaphansi kokhuvethe, ukuhamba uhambo olungaka kwala maqembu ngeke kube yingozi kuwona?
Yize ikhona le mibuzo kodwa ngiyaphinda ngiyasho ngeke saphikiswa isinqumo esithathwa iPSL kanye nabakwaMTN.
Le nkundla ayikaze nangelilodwa ilanga yehluleka ukusingatha umdlalo wamanqamu, okanye umdlalo nje.
Ngikhuluma nje umdlalo wamanqamu wokugcina odlalelwe kule nkundla womqhudelwano weTelkom Knockout (TKO) lapho kwakutholene phezulu iMamelodi Sundowns neMaritzburg United, osekuwumlando ukuthi kwanqoba iqembu lasePitoli ngamabili kwelilodwa, waba ngenkulu impumelelo yize laliyidliva kodwa inkundla yayigcwele phama wawungafunga ukuthi kudlala umdlalo wezinkunzi zaseSowesto iChiefs ne-Orlando Pirates.
NgoLwezi nonyaka iBafana Bafana idlale umdlalo wayo wokuhlungela ukungena ku-African Cup of Nations (AFCON) ezoba nganyaka ozayo neSao Tome kuyo le nkundla.
Imidlalo yamanqamu engasoze yakhohlakala eyadlalelwa kule nkundla oweTS Galaxy lapho yayibhekene neKaizer Chiefs nyakenye, owangonyaka wezi-2017 kwakudlala iSuperSport United nePirates yomibili le midlalo kwakungeyeNedbank Cup.
ITS Galaxy yanqoba ngegoli elilodwa eqandeni, kowesibili kwanqoba iSuperSport United ngamagoli amane kwelilodwa.
Okunye engicabanga ukuthi yikho okulethe lo mdlalo kule nkundla ukuthi ayisingathanga imidlalo eminingi ngonyaka wezi-2020. Okusho ukuthi inkundla ayinayo inkinga ikulungele ukusingatha lo mdlalo nanoma kuthiwa kwenzakalani kusasa.
Izinkundla zaseGoli zisebenze kakhulu kwazise imidlalo ye-Absa Premiership esibizwa ngeDStv Premiership iqedelwe khona ngokunjalo neyeGladAfrica Championship.
Esinye sezizathu ukuthi abaxhasi balo mqhudelwano bazokwazi ukuwukhangisa lo mdlalo kubantu.
Iqiniso lithi abathandi bakanobhutshuzwayo baKwaZulu-Natal ibona abahambela kakhulu imidlalo kuleli.
Lokho kusho ukuthi uma abakwaMTN behambela izindawo okubalwa iWorkshop, iMega City nezinye izindawo abalandeli bazoba khona kukwazi ukuthi lo mdlalo umaketheke yize ungeke uthanyelwe izibukeli.
Amaqembu azotholana kulo mdlalo iBloemfontein Celtic nePirates, uzoqala ngelesi-6 kusihlwa.
Abathandi bakanobhutshuzwayo bazowubuka kuSABC 1 nakuChannel (202) kuDStv.
nguSabelo Maphumulo Dec 11, 2020